वृद्धभत्ता लिन वृद्धवृद्धालाई सास्ती :: a1nepal.com.np
वृद्धभत्ता लिन वृद्धवृद्धालाई सास्ती
ध्रुव अधिकारी, हेटौंडा, २७ वैशाख
स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार मत आफ्नो पक्षमा पार्न दौडधूप गरिरहेका छन् । सबै उम्मेदवारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता सहज रूपमा उपलब्ध गराउनेदेखि वृद्धवृद्धाका लागि धेरै एजेन्ड सार्वजनिक गरिरहेका छन् । तर, हेटौंडाका वृद्धवृद्धाले वृद्ध भत्ता लिन सकस भइरहेको छ ।
उम्मेदवार वृद्धवृद्धाका लागि मीठा योेजना लिएर चुनाव प्रचारमा दौडिरह“दा वृद्धवृद्धाले वृद्ध भत्ताका लागि बैंकमा सास्ती भोगिरहेका छन् । वैशाखको चर्को घाममा वृद्धवृद्धा घण्टौं लाइनमा बसेर हेटौंडाको नेपाल बैंक लिमिटेडबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिइरहेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन वृद्धवृद्धा आफैं बैंकमा जानुपर्ने भएपछि समस्यामा परेका हुन् । हेटौंडा उपमहानगरपालिका भित्रका वृद्धवृद्धा ८ हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन लामो यात्रा गरी घण्टौं लाइनमा बस्नु पर्दा समस्यामा परेका हुन् ।
हेटौंडा–१२ भोर्लेबाट आएका ७३ वर्षीय मानबहादुर विश्वकर्मा वडाबाटै भत्ता लिन सजिलो भएको बताउ“छन् । अहिले बैंकमा सास्ती भएको भन्दै गुनासो पोखे । बैंकले वृद्धवृद्धालाई छिटो र सरल सेवा प्रदान गर्नुपर्नेमा विभिन्न वहानामा घण्टौं घामपानीमा राखेर यातना दिएको उनले आरोप लगाए ।
हेटौंडा १४ बाट आएका हरिप्रसाद पौडेल बैंकले दुःख दिएको प्रति रुष्ट छन् । उनले भने, ‘यहाँसम्म आएको भाडा कसले दिन्छ ? हामी यसरी बिजोग भएर बस्दा कसले जिम्मा
लिन्छ ? त्यत्तिकै दुःख दिन त पाइन्न ।’ उनले ओत लाग्ने ठाउ“सम्म नभएको स्थानमा शारीरिक रूपमा कमजोर वृद्धवृद्धालाई घण्टौं कुराउने काम बैंकले गरेको बताए ।
हेटौंडा–१४ बाटै आएकी ७८ वर्षीया सुकुमाया स्याङ्तानले यो उमेरमा पनि सरकारले दुःख दिएको गुनासो गरिन् । उनले पनि वडाबाटै आफूलाई सजिलो भएको बताइन् । हेटौंडा– १२ घरेडी डा“डाका ९३ वर्षीय मानवीर घलानले बैंकमार्फत भत्ता दिन थालेपछि वृद्धवृद्धाले दुःख पाएको बताए ।
बैंकको गेटबाहिर चर्को घाममा वृद्धवृद्धाको भीड लागे पनि बैंकले भित्र पस्न र बस्न नदिएको उनीहरूको गुनासो छ । केही महिना अघिसम्म वडाबाटै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइएको भए पनि अहिले सरकारले बैंक खाताबाट भत्ता वितरण गरिरहेको छ ।
एकै समय दुईतिर काम गर्ने डाक्टरलाई कारबाही गर्ने चेतावनी हात्ती र मान्छेको द्वन्द्व कहिलेसम्म, झापामा पाँच वर्षयता २४ जनाको मृत्यु ढलेको धरहरा अझै उस्तै, मिश्रित प्रणालीबाट बनाउन अर्को सम्झौता गृहमन्त्रीको खुलासा: ‘हवल्दार रानालाई धन्यवाद दिएको हो, १५ सय होइन’ नेपालगन्जमा राप्रपाको विजय जुलुसमा घन्कियो – ‘हिन्दू–मुस्लिम भाइभाइ, धवलशमशेर हाईहाई’ हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रबारे आयोग पछि हट्यो , राप्रपाको आन्दोलन फिर्ता चन्दलाई आइजीपी बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश हरियो घाँस देखाउने बित्तिकै सरकार ढल्छ : एमाले अध्यक्ष ओली महाकाली नदी थुनिन थाल्यो, दार्चुला सदरमुकाम डुबानमा पर्ने सम्भावना मिर्गौला पीडितद्वारा टिचिङ अस्पतालको झ्यालबाट हाम फालेर आत्महत्या
← कांग्रेसले नाम्लो लगाएर माओवादी बोकेको ओलीको आरोप	रेखा थापाको चुनावी ग्ल्यामर →